Snapdragon7ပါသည့် Galaxy S820? | Androidsis
Snapdragon7ပါသည့် Galaxy S820? ဒါကအခြေခံစံနှုန်းအားဖြင့်ပြသနေသည်
နည်းပညာသည်ခုန်ကျော်။ တိုးတက်လာခြင်းကြောင့်သံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လာမည့်နှစ်၏ပထမသုံးလပတ်အတွင်းထွက်ပေါ်လာမည့်ကိရိယာများနှင့် ပတ်သက်၍ ပထမဆုံးကောလာဟလများကိုစတင်ကြားနာခြင်းသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်။
လာမည့်နှစ်တွင်အလင်းကိုမြင်ရမည့်ဤစက်ပစ္စည်းများထဲမှတစ်ခုမှာဖြစ်လိမ့်မည် Samsung ရဲ့ Galaxy S7။ ယနေ့အထိကျွန်ုပ်တို့သည်အကြီးမားဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းပြပွဲဖြစ်သည့် Mobile World Congress တွင်ကိုးရီးယားကုမ္ပဏီကိုမကြာသေးမီကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်ကိုတွေ့ရသည်။
ဒီအချိန်မှာ Samsung ကသူ့ရဲ့မြို့တော်ကိုရွေးမယ့်သူကိုရွေးမယ်။ ၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်လာမည့်နှစ်အစပိုင်းအထိစောင့်ဆိုင်းရ ဦး မည်ဖြစ်သော်လည်းအနာဂတ်တွင် Samsung S7 နှင့်ပတ်သက်သည့်ပထမဆုံးကောလာဟလထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
Galaxy S7, ပထမကောလဟာလများ
Galaxy S7 ဟုခေါ်တွင်သောအမည်မှာ Project Lucky ဟုခေါ်သည်။ အနာဂတ် terminal သည်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ယနေ့အထိမမြင်ဖူးသည့်တော်လှန်ရေးတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ လက်ရှိ Samsung Galaxy S6 တွင် Samsung ကိုယ်တိုင် Exynos 7420 မှထုတ်လုပ်သည့်ပရိုဆက်ဆာတပ်ဆင်ထားပါကဤအကွာအဝေး၏သတ္တမမြောက်ဗားရှင်းတွင် Snapdragon 820 ပါ ၀ င်နိုင်သည်။
ဤအချက်အလက်များသည်ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူ၏အနာဂတ် terminal ၏ရှေ့ပြေးပုံစံဖြစ်နိုင်သည့်အခြေခံစံနှုန်းတစ်ခုယိုစိမ့်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပုံတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းကိရိယာ၏အမည်သည် Galaxy S7 ၏ကုဒ်နံပါတ်နှင့်တူညီသည်။ ၎င်းသည်အောက်တွင်တွေ့ရမည့်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များရှိသည်။
AnTuTu သည် terminal ကိုပထမဆုံးကောလာဟလများနှင့် Samsung ထုတ်ကုန်တွင်ထည့်သွင်းမည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အတူပြန်လည်ပေးပို့သည်။ စောလွန်းသေးပြီးအရာအားလုံးပြောင်းလဲနိုင်သည်ဖြစ်သော်လည်းကိုရီးယားဆိပ်ကမ်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်းမှာတော့ Processor တစ်ခုရှာမယ် Snapdragon 820 Qualcomm မှပြုလုပ်သောဤစက်သည် chipmaker ၏ high-end SoC ဖြစ်သည်။ ဒီ SoC နဲ့အတူ S7 မှာပါဝင်မှာပါ4GB RAM မှတ်ဉာဏ်.
သင့်မျက်နှာပြင်သည်သည်အထိကြီးထွားလာလိမ့်မည် 5,7 လက်မ။ ဤဖန်သားပြင်တွင် 2560 x 144o pixels နှင့်ညီမျှသော QHD resolution ရှိလိမ့်မည်။ Samsung prototype ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ပါက၎င်းသည် Android 5.1.1 Lollipop အောက်တွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုမြင်နိုင်သည်။ ၎င်းတွင် 64GB RAM memory နှင့်ကင်မရာများ၏ ၅ megapixels ဖုန်း၏နောက်ဖက်တွင်ရှိသောအဓိကကင်မရာနှင့်ရှေ့ကင်မရာအတွက်5MP အတွက်ဖြစ်သည်။
ကျန်ရှိနေသေးသောအရာများစွာကျန်ရှိနေသေးသည့်အတွက်၊ ဤကောလာဟလသတင်းများသည်မျက်လုံးများနှင့်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ယူရန် ပို၍ ကောင်းသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ Galaxy S7 ၏ပထမဆုံးကောလာဟလများမှာဤတွင်ရှိသည်။ တဖန်သင်တို့က, အနာဂတ် Samsung terminal အကြောင်းဒီကောလာဟလတွေကိုခင်ဗျားဘယ်လိုထင်သလဲ ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Snapdragon7ပါသည့် Galaxy S820? ဒါကအခြေခံစံနှုန်းအားဖြင့်ပြသနေသည်
အနည်းဆုံး ၄ လသူတို့တင်ပြသည့်အထိသင်ကောလာဟလများနှင့်စတင်သည်။ သေချာသည်ကလာလိမ့်မည်
haha 64 gb ram, တစ်ခုသည်အရူးဖြစ်သည်၊ ကောင်းစွာစုံစမ်းစစ်ဆေးရမည်။ ကောလာဟလများအရ 20 mpx ကင်မရာနှင့် 4k မျက်နှာပြင်ရှိသည်။
ip68 လက်မှတ်နှင့်ရုရှားအတွက် 5g ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ